Teknolojiyada SMT - Pandawill Technology Co., Ltd.
Si aan u gaarsiino dabacsanaanta, ka jawaab celinta, tayada wanaagsan iyo shuruudaha waqtiyada hogaaminta, waxaan sii wadeynaa maalgashiga mashiinada cusub, howlaha iyo kuwa ugu muhiimsan dadkeena. Iyada oo afar khadad SMT xawaare sare leh oo isku dhafan loogu talagalay wax soo saarka ugu weyn. Khad kasta wuxuu leeyahay daabacayaal otomaatig ah oo loo yaqaan 'Desen automatic' iyo foornada aagga 8 ah, oo kuxiran gawaarida otomaatiga ah iyo kuwa rarka / rarka, iyo nidaamka khadka AOI. Mashiinkeenu wuxuu xamili karaa qaybaha laga bilaabo 0201 resistors ilaa ball grid array (BGA), QFN, POP iyo qalabka garoonka wanaagsan ilaa 70mm2.
Daabacaadda Jinka 'Solder' waa geedi socod muhiim ah, oo daabacadeena otomaatiga ah ee loo yaqaan 'Desen automatic automatic printers' ay si sax ah oo isdaba joog ah u gaaraan, iyada oo lala socdo kormeer indhaha ah oo toos ah si loo xaqiijiyo. Reflow Jinka Jinka waxaa si taxaddar leh looga baaraandegaa iyadoo la isticmaalayo foornooyinka convection 8-zone.
Our SMT habsocodyada waxaa si buuxda u taageeraya injineero khibrad leh oo IPC tababaran, iyadoo la adeegsanayo qalabkii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda ee habka dejinta iyo xaqiijinta. Dhammaan kulammada SMT waa AOI la kormeeray iyadoo la adeegsanayo nidaamyada AOI ee khadka ka socda. Raajo ayaa loo heli karaa garoonka wanaagsan iyo baaritaanka BGA.
Maaraynta qalabka waxaa ka mid ah foornooyinka wax lagu dubo iyo keydinta qalalan ee hagaajinta saxda ah. Wixii wax ka beddelka iyo casriyeynta, laba xarumood oo ganaax wanaagsan / BGA rework station ayaa laga heli karaa.